Ithegi: ukuqiniswa | Martech Zone
Ukuphunyezwa kweendlela zokudlala yindlela elungileyo yokukhuthaza ekujolise kuko ukuba uye kwinqanaba elilandelayo. Ukuba unesoftware esele ikhona okanye inkqubo onqwenela ukongeza kuyo umaleko wokudlala kwaye awunaxesha lokuba neqela lakho labaphuhlisi bakhe isisombululo esipheleleyo, emva koko iPlayoff ibonelela ngendlela ekhawulezileyo efanelekileyo. I-Playoff yimithetho enamandla yenjini enokudityaniswa ngokulula nge-SDK API kuyo nayiphi na into
NgoLwesihlanu, Oktobha 19, 2018 NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2018 Douglas Karr
Abantu bayandithanda. Banike umyalezo omnandi wentengiso ngesaphulelo kwaye baya kuhamba… kodwa banike ithuba lokuphumelela ibheji kwiphepha labo kwaye bayakulwela. Ndiyazihlekisa njengoko ndizifumana ndikhathazekile emva kokuphulukana nosodolophu kwi-Foursquare-kuyahlekisa. Yiloo nto ukuguqulwa okuxhomekeke kuyo. Kutheni iGamification isebenza? I-Gamification isebenza ukwanelisa eminye yeminqweno yabantu esisiseko: ukwamkelwa kunye nomvuzo,
I-SOCXO: Ukuthengisa okuthethelelayo ngeXabiso lokuSebenza ngokuSebenza
NgoLwesibini, Februwari 20, 2018 NgoMvulo, Februwari 19, 2018 UMukund Krishna
Njengengxenye yommandla wokuThengisa isiQinisekiso, ukuThengiswa kweDijithali ukuza kuthi ga ngoku yeyona ndlela ikhethwayo yeBrands yokufikelela kubaphulaphuli bayo kwi-intanethi. Imodeli yoRhwebo lweDijithali eqhelekileyo iquka indibaniselwano ye-imeyile, uPhando kunye noThengiso lweMithombo yeendaba yezeNtlalontle kwaye ukuza kuthi ga ngoku isebenzise indlela ehlawulweyo kunye nehlawulwayo yokwenza kunye nokusasaza umxholo webranti kwi-intanethi. Nangona kunjalo, kuye kwakho imiceli mngeni kunye neengxoxo kwisicwangciso-qhinga, ukulinganiswa, iziphumo kunye ne-ROI yeendaba ezihlawulelweyo
NgoLwesine, Julayi 13, 2017 NgoLwesine, Julayi 13, 2017 Douglas Karr
Itekhnoloji yokunyusa ukuthengisa ye-B2B i-ConnectLeader ibhengeze ukubakho kwe-TopRung yokuthengisa umdlalo kunye nesixhobo sokulawula ukusebenza. I-TopRung isebenzisa amandla okhuphiswano lweqela ukulungelelanisa, ukwamkela nokukhawulezisa imisebenzi yokuthengisa, kunye nokuqhuba ukwamkelwa kwenkqubo yokuthengisa kunye nokwenza ezona zingxoxo zikhokelela kwisizukulwana esiba ngamathuba emibhobho. I-TopRung isebenzisa amandla okhuphiswano lweqela, ezemidlalo kunye nolonwabo: Ukulungelelanisa, ukwamkela kunye nokukhawulezisa imisebenzi yokuthengisa Inkqubo yokuthengisa eyamkelweyo Yenza iingxoxo ezingaphezulu zokuvelisa eziba ngamathuba wombhobho. I-TopRung yabizwa njengowokugqibela kwi